UZuma uchaze ngezinkinga zezwe | News24
LAST UPDATED: 2019-12-12, 21:27
UZuma uchaze ngezinkinga zezwe
Cape Town - UMengameli wezwe uJacob Zuma, ukhulume sakuthetha wathi akumele uhulumeni azibone enecala ngokushoda kukagesi okukhona ezweni.
UMsholozi uchazele izinkulungwane zabantu wathi ukushoda kukagesi okubonakalayo, kuyinkinga eyadaleka ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo.
"Phambilini izwe lakuleli lalinogesi owanele, lokho kubonwa wumhlaba wonke nosomabhizinisi. Ugesi wawukhonela ukusiza abantu abambalwa, akufani namanje njengoba ugesi ukhonela ukusiza bonke abantu," kusho uNxamalala.
Bheka abahambele umgubho
Umengameli uchaze ngezinkinga eziningi ezibhekene nezwe, ezifana nodaba oluthinta ukubonelelwa kwabasebenzi basezimayini, wachaza nangodaba oluthinta inkohlakalo.
"Kumele iqiniso libekwe obala, uhulumeni ka-ANC yiwona hulumeni wokuqala obeka zonke izinto obala, yiwona hulumeni okwazi ukuveza amaqiniso ngokwenzeka naphezulu kuhulumeni imbala. Asiqondile ukuthi abekho abaqhuba inkohlakalo kwi-ANC, esikushiyo sithi kumele kwazeke ukuthi uhulumeni uyalwa nenkohlakalo."
Izinkumbi zabantu baseNingizimu Afrika bahlangane enkundleni yezemidlalo eKapa, la kubungazwa khona iminyaka engu-103 kwasungulwa i-ANC.